MB 2018 Novambra | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Nandritra ny fiainany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nomen'i Jesosy ny lanjany iray izay mihoatra lavitra noho izay mety ho azontsika, na mahazo tombony na eritreretina mihitsy aza isika. Ny apostoly Paoly dia nilaza izany toy izao manaraka izao: «Eny, mbola ataoko fa manimba ny fahalalana lehibe an'i Kristy Jesosy Tompoko izany rehetra izany. Noho ny antony dia simba avokoa izy rehetra ary raisiko fa maloto ny handresy an'i Kristy » (Filipiana 3,8). Fantatr'i Paoly fa ny fifandraisana velona sy lalina an'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Kristy dia manana sanda tsy manam-petra sy sarobidy indrindra raha oharina amin'ny zavatra azon'ny loharano maina rehetra. Tonga tamin'io fehin-kevitra io izy tamin'ny fijerena ny lova ara-panahy efa azony, tsy isalasalana ny fampatsiahivana ny teny ao amin'ny Salamo 8: "Inona ny olona izay ahatsiarovanao sy ny zanak'olombelona izay tadiavinao?" (Salamo 8,5).
Efa nanontany tena ve ianao hoe nahoana Andriamanitra no tonga tao amin'i Jesosy tahaka ny nataony? Moa ve izy tsy mba niaraka tamin'ireo tafika any an-danitra izay afaka naneho ny heriny sy ny voninahiny? Mety tsy ho biby miresaka izy na tahaka ny mahery fo amin'ny tantara an-tsary Marvel? Nefa araka ny fantatsika dia tonga tamin'ny fomba feno fanetren-tena Jesosy - tamin'ny zazakely tsy dia nananatra. Ny drafiny dia ny hovonoina mafy. Tsy afaka manampy aho fa mandrisika ny hieritreritra ny fahamarinana mahatalanjona izay tsy mila antsika, fa tonga foana izy. Tsy manan-javatra azontsika omena azy afa-tsy ny haja sy ny fitiavana ary ny fankasitrahana.
Koa satria tsy mila antsika Andriamanitra, dia mipoitra ny fanontaniana momba ny hasarobidintsika. Avy amin'ny fomba fijerena zavatra tsy dia misy dikany loatra. Ny lanjan'ny simika izay mandrafitra ny vatantsika dia manodidina ny CHF 140. Raha namidy ny tsoka taolana, ny ADN ary ny taova ao amin'ny vatantsika isika, dia mety hiakatra france tapitrisa ny vidiny. Saingy tsy azo ampitahaina amin'ny sanda marina ny vidiny. Amin'ny maha-zavaboary vaovao an'i Jesosy dia sarobidy isika. Jesosy no loharanom-pahasoavana - ny lanjan'ny fiainana niaina nifandray tamin'Andriamanitra. Ny Triune Andriamanitra dia niantso antsika tsy ho any amin'ny toerana misy antsika mba hahafahantsika miara-miaina aminy amin'ny fifandraisana tonga lafatra sy masina ary fitiavana mandrakizay. Io fifandraisana io dia firaisana sy fiaraha-monina iray izay handraisanay an-tsitrapo sy amim-pifaliana izay rehetra omen'Andriamanitra antsika. Ho setrin'izany dia natolotsika azy ny fananantsika rehetra sy ananantsika.
Ireo mpandinika kristiana dia naneho ny voninahitr'ity raharaha mifankatia ity amin'ny fomba maro samihafa nandritra ny taonjato maro. Hoy Augustine: «Natao ho fanananay izahay. Tsy milamina ny fonay mandra-pahariany ao aminao ». Hoy ilay mpahay siansa sy filozofa frantsay, Blaise Pascal: "Eo am-pon'ny olombelona rehetra dia misy ny fatiantoka izay tsy afaka afa-tsy Andriamanitra irery ihany." CS Lewis dia nilaza: "Tsy nisy olona niaina ny fifaliana amin'ny fahafantarana an 'Andriamanitra te hanakalo azy ireo hahasambatra izao tontolo izao." Nilaza ihany koa izy fa natao mba "hangataka amin'Andriamanitra" ny olombelona.
Andriamanitra no namorona ny zavatra rehetra (Isika olombelona) satria "Andriamanitra dia fitiavana" toa ny nametrahan'ny apostoly Jaona azy (1 Jaona 4,8). Ny fitiavan'Andriamanitra no zava-misy ambony indrindra - fototry ny zavaboary noforonina rehetra. Ny Fitiavany dia tsy misy fetra ary ny fitiavana manavotra sy fanodinana entiny ho antsika ary izany no tena asantsika.
Aoka tsy hohadinointsika ny zava-misy momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Raha ao anaty fanaintainana, ara-batana na ara-pihetseham-po isika dia tokony hitadidy fa tia antsika Andriamanitra ary hanaisotra ny fanaintainana rehetra araka ny fandaharam-potoanany. Rehefa manana alahelo, very, ary alahelo isika, dia tokony hahatadidy fa tia antsika Andriamanitra ary hamafa ny ranomaso rehetra indray andro any.
Fony mbola kely ny zanako dia nanontaniany ahy ny antony tiako azy ireo. Ny valinteniko dia tsy hoe ankizy mahafinaritra ry zareo izay mijery tsara (izay nisy izy ireo ary mbola misy ihany). Tsy resaka an-dry zareo ny maha-mpianatra mahatalanjona azy (izay marina). Fa ny valin-teniko dia hoe: "Tiako ianao satria zanako!" Manohina ny fon'ny antony tian'Andriamanitra antsika: "Azy isika ary mahatonga antsika ho sarobidy kokoa noho ny azontsika an-tsaina." Tsy tokony hohadinointsika mihitsy izany!
Aoka isika hifaly noho ny hasin'ny tena tian'Andriamanitra.